महिलामा यी ६ कारणले हुने गर्दछ बाझोपन, यस्ता छन् सुरुवाती लक्षणहरु – Sandesh Press
September 19, 2021 602
काठमाडौँ । विवाह पश्चात नयाँ दम्पतिमा सन्तान जन्माउने धेरै इच्छा हुन्छ । तर, उनीहरुले सन्तान जन्माउनको लागि धेरै प्रयास गरेपनि उनीहरु आमाबुबा बन्न सक्दैन । जसलाई बाँझोपन भएको भनिन्छ ।
जसको कारण बच्चा जन्माउनको पुर्ण रुपमा क्षमता घटाउँछ । सामान्यतया विवाह गरेको ६ महिनासम्म पनि महिला गर्भवती नभएमा बाँझोपनको समस्या पनि हुन सक्दछ । बाँझोपनको समस्या महिला र पुरुष दुवैलाई हुन सक्छ ।
Prevनयाँ एयरपोर्ट भन्सार नियम :विदेशबाट नेपाल आउदा यी सामानमा लाग्ने भयो भन्सार, कति..?
Nextपैसा टिक्दैन ? पर्समा नभुली राख्नुहोस् यस्तो पाँत, कहिल्यै खालि हुनेछैन तपाईको गोजी !